Nagu saabsan | Vishi (Zhejiang) Fluid Technology Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 1970-yadii Koonfurta Kuuriya, YSC waa soo saare iyo soo-saare waxsoosaarka pneumatic-ka oo leh mug sare oo ku saabsan warshadaha otomatiga. 2000, YSC (Shiinaha) waxay qaadatay Qingdao oo ah xarunteeda waxayna soo saartay dil toogasho kala duwan, xakamaynta, ka shaqaynta qaybaha. iyo qaybo kaabayaal ah, oo si ballaaran loogu adeegsado in ka badan 200 oo warshado otomaatig ah oo otomaatig ah sida baabuurta, elektarooniga, qalabka korontada, baakadaha, mashiinnada, metallurgy, xakamaynta tirooyinka, iwm, oo siinaya xalal sax ah oo macquul ah oo pneumatic ah in ka badan macaamiisha 100,000.
Kadib dadaal sannado ah, YSC (Shiinaha) waxay ku istaagtay xiriirada muhiimka ah ee xakamaynta jihada iyo fulinta pneumatic ee nidaamka pneumatic. Isla mar ahaantaana, iyada oo laga faa'iideysanayo caymiska ballaaran iyo iibka iyo shabakadda saadka ee in ka badan toban gobol iyo magaalooyin ku yaal Shiinaha, YSC (Shiinaha) waxay siisaa macaamiisha adeeg degdeg ah oo hal-joogsi ah.
Ka-qaybgale lagu sameeyay Shiinaha 2025, YSC (Shiinaha) ayaa si adag u shaqeyn doona, ku adkeysan doona hal-abuurnimada, maanka ku haysa hadafkeeda, horay u sii socoshada, sii wadida raacitaanka mabda'a ah in aan lagu masaafurin macaash yar oo aan lagu xadgudbin manulife, oo naftiisa u huro horumarinta mashiinada iyo otomaatiga Shiinaha.
Naga soo wac: 0086-13646182641
Si loo daboolo baahidaada, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.